သမီးလေးနဲ့အပြိုင်လှနေပြီး ကြည်နူးစရာ မိသားစုပုံလေးတွေ မျှဝေခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည် – Suehninsi
သမီးလေးနဲ့အပြိုင်လှနေပြီး ကြည်နူးစရာ မိသားစုပုံလေးတွေ မျှဝေခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
Sue | August 20, 2020 | ရသစုံ | No Comments
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကတည်းက ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗီဒီယိုဇာတ်ကား အတော်များများမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူပါ။ သူမ ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကလည်း ပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ
အကြိုက်တွေ့နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်သင်းကြည်က ယနေ့တိုင် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု​တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်သင်းကြည်ဟာဆိုရင် အရမ်းချစ်ခင်ကြင်နာတတ်တဲ့ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် စိတ်ပျိုကိုယ်နုဆိုသလို အမြဲတမ်းလှပကျော့ရှင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့သမီးချောလေး
စံထိပ်ထားဦးကလည်း အမေတူသမီးလေးဖြစ်လို့ ချစ်မွှေးပါပြီး လူချစ်လူခင်ပေါများပါတယ်နော်။ ခိုင်သင်းကြည်တို့မိသားစုလေးက သာယာနွေးထွေးမှုအပြည့်နဲ့ အရမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှပါတယ်နော်။ယနေ့မှာတော့ ခိုင်သင်းကြည်က မိသားစုတွေ ကြည်ကြည်နူးနူး ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်
စာမျက်နှာထက်မှာ တင်ပေးလာတာပါ။ လှပတဲ့ ဂါဝန်ရှည်ကို ဝတ်ဆင်ကာ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် သမီးလေးနဲ့အပြိုင် အလှတွေပိုနေခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ပုံလေးတွေကလည်း တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတာပါနော်။ ကဲ ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အချစ်ပိုနေမှာ အသေအချာပဲမို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်. ။
အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါကို ခိုငျသငျးကွညျကတော့ ဆယျကြျောသကျ အရှယျကတညျးက ဝငျရောကျခဲ့ပွီး ဗီဒီယိုဇာတျကား အတျောမြားမြားမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျနသေူပါ။ သူမ ပါဝငျထားတဲ့ ဇာတျကားတှကေလညျး ပီပွငျပိုငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှေ
အကွိုကျတှနေ့ခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျသငျးကွညျက ယနတေို့ငျ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျသငျးကွညျဟာဆိုရငျ အရမျးခဈြခငျကွငျနာတတျတဲ့ခငျပှနျးကောငျးတဈယောကျကိုပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ စိတျပြိုကိုယျနုဆိုသလို အမွဲတမျးလှပကြော့ရှငျးနတောဖွဈပါတယျ။ ခိုငျသငျးကွညျရဲ့သမီးခြောလေး
စံထိပျထားဦးကလညျး အမတေူသမီးလေးဖွဈလို့ ခဈြမှေးပါပွီး လူခဈြလူခငျပေါမြားပါတယျနျော။ ခိုငျသငျးကွညျတို့မိသားစုလေးက သာယာနှေးထှေးမှုအပွညျ့နဲ့ အရမျးပြျောရှငျစရာကောငျးလှပါတယျနျော။ယနမှေ့ာတော့ ခိုငျသငျးကွညျက မိသားစုတှေ ကွညျကွညျနူးနူး ကုနျဆုံးခဲ့တဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ
စာမကျြနှာထကျမှာ တငျပေးလာတာပါ။ လှပတဲ့ ဂါဝနျရှညျကို ဝတျဆငျကာ ဆယျကြျောသကျ အရှယျ သမီးလေးနဲ့အပွိုငျ အလှတှပေိုနခေဲ့တဲ့ ခိုငျသငျးကွညျရဲ့ ပုံလေးတှကေလညျး တကယျကို ခဈြစရာကောငျးတာပါနျော။ ကဲ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ခိုငျသငျးကွညျရဲ့ ပုံလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အခဈြပိုနမှော အသအေခြာပဲမို့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော. ။
Source : Khine Thin Kyi’s Facebook
လက်ဦးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းနဲ့ အမှတ်တရတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
မိတ်ကပ်လင်းလင်းနဲ့အတူ ရတနာတွေဝယ်ထားတာကို အူတက်နေရအောင် အရွှန်းလေးဖောက်ပြီး ဟာသလေးလုပ်ပြခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
အိမ်မှာနေရတာပျင်းလို့ ခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီး ကနေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နေဝင်းကို ဗီဒီယိုလေး ခိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်ချော
ဈေးသည်ဘဝကနေ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာတာကြောင့် ဈေးသည်တွေရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်တယ်ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူ